Prometheus In The New Age: မုန်တိုင်းကြားက ယုံကြည်ချက်ခိုင် ကလောင်ကိုင် ၈ လေးလုံး သူရဲကောင်းများ
မုန်တိုင်းကြားက ယုံကြည်ချက်ခိုင် ကလောင်ကိုင် ၈ လေးလုံး သူရဲကောင်းများ
မုန်တိုင်းကြားက ယုံကြည်ချက်ခိုင် ကလောင်ကိုင် သူရဲကောင်းများ
“ ပြဿနာ အခက်အခဲတွေ အတွက်
ဖောက်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ”
“ ကျွန်မတို့လွတ်လပ်မှုတွေမြှင့်တင်ဖို့ သင်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို အသုံးချကြပါ။ ”
၁၉၈၉ ဧပြီလက ချင်းခရီးစဉ် NLD လူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း )
“ အခုအခြေအနေ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးဟာ ထောင်ချည်းဘဲ။
ဒီထောင်ကြီးထဲကနေ ထောင်သေးလေး ကို ၀င်သွားရမှာ ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်နေရမှာလဲလို့ ကျွန်မတို့ပြန်မေးရပါမယ်။ ”
“ To people of Myanmar must have the courage to say no to injustice and yes to the truth.
They must also work to correct their own wrongdoing that hurt society.
( Speech at the first 88 Generation meeting in August 2006 )
“ ဟိုဟိုအရင်တုန်းက ကြားဖူးနားဝရှိတဲ့ ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ ဒီတစ်ခါ ကိုယ့်ကျတော့မှ တည့်တည့်ကို တိုး တာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီတော့ စွဲသမျှ ဒါသည် တစ်ချိန်ကြရင် ပျယ်မယ်ဆိုတာကြီးကို ကျနော်က နှလုံးသွင်းထားရပြီ ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပျက်ခါမှပျက်ရောပေါ့။ ဖြစ်နိုင်သမျှတော့ ဖြစ်ရဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်တည်ပျက် ဆိုပြီးတော့ အဲ့ ဒါကို ဥပါဒ်ဘီဘင် ကိုယူပြီး အဲ့ဒါဟာ နှလုံးသွင်းပြီး စွဲရတာပေါ့ဗျာ။ ”
အနုပညာကို သိမ်မွေ့စွာ ဖန်တီးခံစားနိုင်သော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်
သူ၏ အကျဉ်းတိုက်အတွင်း ခံစားရသော ခံစားချက် ( ၂၀၀၅ )
“ မပြီးမြတ်သော တော်လှန်ရေးတွင်
( ကိုမင်းကိုနိုင် သစ္စာကဗျာမှ )
မက်စရာ အိပ်မက်လည်း မရှိဘူး။
အထက်တန်း အိပ်ခန်းတွဲနှစ်စောင်။ ”
( စစ်တွေထောင်တွင်းစပ်ကဗျာ )
( ၂၀၀၇ သြဂုတ်လ ၇ ရက် နေ့က တာရာမင်းဝေ ရဲ့ ဈာပနမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ကိုယ်စား ကိုမင်း ကိုနိုင်ရေးဖွဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့ ကဗျာမှ )
“ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး ခေါက်ရိုးကျိုး
အံမကျဘူး ….. ”
“ သူမိုက်ဟာ ကံကောင်းနေမှန်းမသိလို့ မခံစားပေမဲ့
လူလိမ္မာဟာ ကံဆိုးနေမှန်းသိလို့ ခံစားရပေတယ်။
လူလိမ္မာကံကောင်းတော့ ဇတ်ပေါင်းခန်းတော့မျှော်ရီရီ။ ”
( ကံခေသူကဗျာမှ )
“ နှစ်ကူးလို့သာ ဂဏန်းကြီးလာတာ
ဖော်ပြစရာ အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူး။ ”
( “ မရှိခဏ ” ကဗျာမှ )
ရွှေဂိုးတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ကန်သွင်းချင်နေကြတယ်။ ”
( ဘောလုံးသမားသူငယ်ချင်းများ ကဗျာမှ )
တိုက်ဆင်တွေလို အရေထူဖို့ ကြိုးစားနေရတာ
တိုက်ပွဲကြမ်းက ဒဏ်ရာ အောင်ပွဲမှာပြကြေးကို။ ”
( မျှော်လင့်ခြင်း ကဗျာမှ )
ဒေါင်းအလံ ပြန်စိုက်မယ်။ ”
( ၈၈၈၈ ကဗျာမှ )
“ တကယ်တော့ ကြယ်တွေရဲ့ဘ၀မှာ အဖော်နီးတာ၊ အဖော်ဝေးတာ အရေးမကြီးပါဘူး။
လောကအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ကြယ် ဘယ်တော့မှ မကြွေတာ သေချာတယ်။ ”
( နောက်ကြည့်မှန် ၀တ္ထု မှ )
“ ကျွန်တော့်သဘောကတော့ မျှော်လင့်နေတာထက် ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။
အားပေးတာထက် ၀င်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ”
“ သားစားကျားမှန်း သိပါလျှက် ဖက်လုံးမိခဲ့ပြီ။ ခြေကပဲ စ၀ါးဝါး၊ ခေါင်းကပဲ စကိုက်ကိုက်၊ မသေမချင်းတော့ မလျှော့တမ်း သတ်မှတ်ရုံသာဟု နှလုံးပိုက်ပြီး သံတိုင်ကိုခေါင်းပြု၊ နံရံလေးဘက်ကိုခြင်ထောင်မှတ်ကာ ကြိုမ မြင်နိုင်သော အိပ်မက်ကို ဆုတောင်းခြင်းကင်းကင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါ၏။ ”
“ ခေါင်းသူကြီးက အမူးပါး
ခြေကန်လို့ ငြင်း … ”
( စစ်တွေထောင်တွင်း အကျဉ်းကျနေစဉ် စပ်ဆိုသော ကဗျာ )
“ ကျွန်တော်တို့က အဖမ်းမခံရမှာ မကြောက်ဘူး။
အလုပ်မလုပ်နိုင်မှာပဲ စိုးတယ် ”
အဖမ်းမခံရခင် တစ်ရက်အလိုတွင်ပြောသောစကား ( ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၆ )
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်က
အကြမ်းမဖက် အနုနည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဓိဌာန်ပဲ၊ သံဓိဌာန်ပဲ။ ”
ကိုကိုကြီး၊ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၆
“ သားလည်း စိုစွတ်တဲ့မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးဖို့
မျက်ဝန်းတွေကို လင်းလက်စေဖို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လောင်းကျွမ်းခဲ့နေကြတာပါ။ ”
( “ လားရာ ” “ ၀တ္ထု ” မှ )
“ မေမေဟာ မေမေ့မိသားစု
စွမ်းနိုင်သမျှ အကျိုးပြုခဲ့ပြီဘဲ ….. ပိုအရေးကြီးတာက
မေမေဟာ …... ရှင်သန်နေတဲ့အခိုက်
ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်ရည်ကြီးငယ် မကျစေခဲ့ဘူးလေ …
ဒါပါဘဲ … ။ ”
( သူ၏ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မွေးမိခင်အတွက် ကိုယ်တိုင်ရေး လွမ်းချင်း “ လားရာ ” မှ ကောက်နှုတ်ချက် )
“ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်စေတနာတွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်၊ ရိုးမကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပျံ့နှံ့ပြီးတော့ သက်ဝင်နေလိမ့်မယ်။ တည်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပြီးသား … ။ ”
“ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာက ပြည်သူတွေနဲ့ မထိစပ်လို့မရဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှု မရဘူးဆိုရင် ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်း၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကတော့ ဆက်ဆံပါ။ နိုင် ငံရေးသမားကို ရဲရဲတင်းတင်း ဆက်ဆံပါ။ ထောက်ခံပါ။ ဆူပူမှု လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်နေ တာမဟုတ်ဘူး။ ”
( အင်တာဗျူး တစ်ခုမှ )
“ လူကို ဖမ်းလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကိုတော့ ချုပ်နှောင် ထားလို့ မရဘူး။ သတ်ဖြတ်လို့မရဘူး။
( အဖမ်းမခံရမီတစ်ရက်အလိုတွင် ပြောကြားသောစကား )
“ ၈၈ မျိုးဆက်ဟာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အငြိမ်းချမ်းဆုံး နဲ့ အညင်သာဆုံး အသွင်ကူး ပြောင်းနိုင်ငံရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောလိုပါတယ်။ တခြားရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အရိုးတွေတောင်လိုပုံမှပဲ တည်ဆောက်လို့ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျွန် တော်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါဘဲ။ ”
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးသမျှ၊ ပေးဆပ်သမျှဟာ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အချည်းနှီးမဟုတ်ဘူး။ လူမိုက်တွေရဲ့လုပ်ရက်မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲချင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လေးနက်တဲ့ ဆုံး ဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ”
“ ကျွန်မရဲ့ လေးလသားအရွယ်သမီးလေးကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကစပြီး ယောက္ခမတွေနဲ့ ထားခဲ့ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်မအလွန်ပဲ မွန်းကြပ်ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ဘ၀မှာအဆိုးရွားဆုံးနေ့တွေလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ များပြားလှတဲ့ အနာဂါတ်မဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်တွေမျက်နှာလေးတွေကို ကျွန်မမြင်နေရလို့ပါဘဲ။ ဒါကြောင့်ဘဲ ဒီ ဒီမိုကရေစီ ခရီးရှည်ကြီးကို ဆက်လက်ချီတက်ဖို့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အားပေးမိပါတယ်။ ”
( ၄ လသားအရွယ်ရှိ သမီးလေးကိုထားပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေစဉ်အတွင်း RFA သတင်းဌာနနဲ့ ဆက် သွယ်မေးမြန်းချက်မှ )
ဖန်တီးတင်ပြသူများ ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ အလင်းဆက် နှင့် ဘလော့ခ်ဂါ ခမိခဆဲ
Posted by အလင်းဆက် at 1:11 AM